बालुवा बोक्ने राङदान तामाङ यसरी बने करोडपति ! एकपटक अवस्य पढ्नुहोस
एकजना महिला टोकरीमा अण्डा बोकेर बेच्न बजार जान्छिन् । अण्डा बेचेर धेरै अण्डा पार्ने कुखुरी किन्ने, धेरै अण्डा बेचेर गाई किन्ने, दूध बेच्ने र क्रमश धनी, झन धेरै धनी बन्ने कल्पना गर्छिन् । यस्तै कल्पनामा डुबेर हिँड्दा एउटा ढुंगामा ठेस खाएर लड्छिन्, सबै अण्डा फुट्छ । निकै चर्चित छ यो कथा ।
अनावश्यक सपना देख्न हुँदैन भन्ने शिक्षा दिन्छ यो कथाले । अब यो कथालाई उल्टो पारौं । अर्थात्, ती महिलाले बोकेर बजार लिँदै गरेको अण्डा नफुटेको भए, उनले सोंचेजस्तै भएको भए के हुन्थ्यो होला ? मीठो छैन त यो कल्पना ?
अब यथार्थमा रामेछापको गरिब परिवारका राङदान तामाङ कुनै जमाना काठमाडौंमा खोलामा बालुवा बोक्थे । सबै मानिसले झैं उनले पनि धनी भएको, सफल भएको सपना देख्थे । पछि उनी गाडीमा सहचालक बने । त्यसपछि चालक बने । हिमाल पावर कम्पनीको गाडि चलाउन थाले । मनभित्र धनी र सफल बन्ने सपना थियो । त्यसैले उनले थाले नेटवर्क मार्केटिङ ।
टोकरीमा अण्डा बोकेर बेच्न हिँडेकी महिलाको जस्तै भयो राङदानको सपना । अण्डा फुटेपछि ती महिलाले के गर्छिन् भन्ने वर्णन कथामा गरिएको छैन । तर, रामेछाप दोरम्बाका यी नायकले भने हरेश खाएनन् । आगोले पोलेको घाउ आगोले सेकेर निको पार्नुपर्छ भने झैं यिनले जडिबुटिकै खेति थाले ।
उनले बारीमा ठूलो ओखतो, बोझो, पदमचाल लगायतका विरुवा लगाए । नेटवर्क मार्केटिङको अवैध कमाईभन्दा माटोमा पसिना बगाउने कमाईमा उनले भविष्य देखे । उनले माटोमा सुन फलेको सपना देख्न थाले । त्यसपछि २०६८ सालमा सैलुङ एग्रिकल्चर प्रोडक्सन प्रालि दर्ता गरे । फलफूल, जडिबुटी तथा अन्य विभिन्न कृषि उत्पादन थाले ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्बा गुरुङ्गको रोचक प्रेम बिवाह, ३२ वर्ष बिछोडको तपस्या…
आइमाई मान्छेले गर्ने भन्दा फरक काममा कमला चौधरी, अहिले उनि हेड मिस्त्री छिन् (भिडियो)
भूकम्प जाँदा धरहराबाट खसेर पनि बाँचेकी रमिला, के भन्छिन् उनि ?
डाक्टरले तीन महिना आयु तोकेको थियो, दुई वर्षदेखि उनी तन्दुरुस्तै छिन्
२०२० सम्म यी ५ राशिमा शनिको ढैय्या र साढेसातको दशा चल्ने ! अपनाउनुस यी उपाय
२५ वर्षकी भए कैयौं पटक ब्वाईफ्रेण्डका साथीहरुसँग नि सेक्स गरेँ !